JINGHPAW KASA: ဗမာစစ်တပ်မှ ဒေါ်နာ့ဖော့ခါန်တောင်အား မဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်
ဖေဖော်ဝါရီ (၂) စနေ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော် ကားလမ်း ဒဘတ်ကျေးရွာ နှင့် အင်ခရာမ်းကျေးရွာကြားတွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဗမာအစိုးရ တနိုင်းခြေစိုက် စစ်တပ်များမှ ကလေးသည် မိခင် ဒေါ်နာ့ဖော့ခေါန်တောင် အား လူမဆန်စွာ မဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များသည် ရောက်ရာဒေသများ၌ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများအား ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်၊ အမျိုးသမီးများအား မဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်၊ ကချင်ရွာများကို မီးရှို့ဖက်ဆီးမှုများ အချိန်တိုင်း လုပ်ဆောင်နေလျက် ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
Kachin lady had been raped and killed baseabetween Dabak and N Hkram village; it is located on Myitkyina – Bahmo road, by Burmese Government troops which are from Danai base during these days according to KIA front line officer report. The Kachin lady, Nahpaw Hkawng Tawng, was house wife and had children. Actually, wherever these Burmese Government troops arrive they always make torture the civilians, rape and kill the women, and burn down the Kachin village.
myen hpe naw kam hpa nga ding yang gaw ndai zawn naw hkam sha ra nga na re hpe dum ga oi.
N-dai sumla hte Mabyin hpe. UNHCR..UK..EU..USA..UN CHINA..FRANCE..,zawn re Mungkan mungdan de lawan ladan shana shabra dat ga.. Myen hpe madi shadaw nga ai.kam ai. Mungdan ni hpang de.. lawan ai hku shapoi dat mu.....,
စောက်ဗမာအစိုးရရဲ့ ဖာခေါင်းတွေ လီးပဲ မင်းတို့ ရဲ့မအေစောက်တွေကိုကိုယ်ချင်းစာသလိုကိုယ်ချင်းစာစမ်းပါ လီးကို ဖရဲသီး နှင့် စို့ ထားပါလား
သိန်းစိန်အစိုးရ သည်စစ်တပ်အ ပေါ်သြဇာသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းသိသာလှပါသည်။ခိုင် လုံတဲ့အ